အစီအစဉ် ၁၅ ပြီးသွားတဲ့ အခါ ကျွန်တော်တို့ ပွဲကြီးတော့ အားလုံး ကမောက်ကမအနည်းငယ် နဲ့ အောင်မြင်စွာ ပြီး ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံတွေကို စုရိုက်လိုက် ပစ္စည်းတွေ ကပြာကယာသိမ်းလိုက်နဲ့ မောင်ပွတ်ရဲ့ စင်္ကာပူက ဖုံးကို အားလုံးက အမောတကော ပြောဆိုနှစ်သိမ့်ကြပါတယ်။ ကဲအားလုံးလဲသိမ်းလို့ အပြီး တနေကုန် ဘာမှ မစားကြရသေးတဲ့ ကိုယ့်လူတွေအတွက်ရော ဦးရဲမြတ်သူတို့ ကိုသောင်းစုငြိမ်းတို့ နဲ့ပါညစာအတူ စားဖို့ အမြန် စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ နေရာကတော့ မြစ်အတွင်းရှုခင်းများ ကြည့်ရင်း စားသောက်နိုင်ဖို့ အတွက် ပန်းဆိုးတန်း နန်းသီတာ ဆိပ်ကမ်းက ရွှေဘဲ ကိုရွေးချယ်ရင်း လူစုခွဲသွား ဖို့ ငါးယောက် တသုတ် စီစဉ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဟော တသုတ် ဟော တသုတ် လွှတ်လိုက်ပြီး အရင်ရောက်တဲ့သူ စားပွဲကြိုစီစဉ်ပေး ဖို့ပါမှာလိုက်ပါတယ်။ မကြာပါဘူး နောက်ဆုံး ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ အသုတ် ဟောခန်းထဲကထွက်တယ်ဆိုဘဲ လာပါပြီဗျာ အဲဒီနေ့ရဲ့ လွဲချော်မှုတွေ- - - - - - -
အ၀င်ဝကနေ လှည့်ပြန်လာကြတဲ့ ကိုယ့်အဖွဲတွေကို တစီတန်းကြီး တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။ ဘာဖြစ်ရမလဲ ကားငှားလို့ မရတော့ဘူးလေ၊ အချိန်ကတော်တော်လေး နောက်ကျနေပြီ။ မထူးပါဘူးဆိုပြီး မလောက်မငှ ထီးတွေနဲ့ နောက်ပေါက်ကနေ သမိုင်း သံလမ်း နားရောက်အောင်လမ်းလျောက်ကြရတော့တာပေါ့။
ထီးပျောက်ရင် အိမ်ကဆူမှာကြော်တဲ့ ဆက်စီစစ်နဲ့ ကျွန်တော်အတူတူ ထီးဆောင်းလို့ တပျော်တပါး တောလမ်း ကထွက်လာလိုက်တာ မိုးတွေကလဲ စက်စက်ယို ၊ လမ်းမှာလဲ ဧရာမတီကောင်ကြီးနေ့တွေ့လို့ ဓါတ်ပုံတွေရိုက် နဲ့ ပျော်စရာကြီးပေါ့နော်။ လူကဘဲထီးဆောင်းသလား ထီးကဘဲ လူကိုပြန်ဆောင်းသွားလား မသိဘူး အားလုံး အားလုံး တခြမ်းဆိုလို့၊ အသီးသီးကားတွေငှားရင်း ဆက်လက်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ အတူ ဆက်စီစ်၊ ကိုကြီးကျော်၊ ကိုသန့်ဇော်မင်း၊ ထူးထူးခြားခြား မဒီဂျွန်ကပါလာသေးတယ်။ မိုးရွာနေလို့ မှန်တွေ ပိတ် ထားရတာပေါ့၊ ပူလိုက်တာဗျာ ခေါင်းတွေတောင်ကိုက်ပါ့၊ စကားတွေတပြောပြောနဲ့ ဆက်စီစစ်တယောက် ကားပေါ်မှာ အိပ်ငိုက်ရင်းလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ဓါတ်ပုံတွေကို ကိုစိုးဇီယျလို ဂျာနယ်ရှော်တွေ လိုချင် မှန်းတော့ သတိရလိုက်သေးတယ်။ ဟိုလဲရောက်ရော ကျွန်တော်တို့က အရင်ရောက်နေသူတွေဖြစ်လေတော့ စီစဉ်စရာတွေထပ်လုပ်ပေး၊ ခဏလောက်မှာ လူတွေအားလုံးစုံသွားပါတယ် အယောက်၂၀ ကျော်ပါတယ် ။
စားစရာတွေ သောက်စရာတွေ ကို အားလုံးအစဉ်ပြေအောင် ကြည့်မှာလို့ အပြီး ဦးရဲမြတ်သူနဲ့ ကိုသောင်းစုငြိမ်း ရောက်လာပါတယ် ၊ ကျွန်တော်ရယ် ကိုတက်ရယ်၊ ကိုစစ်ရယ်၊ ကိုမျက်လုံးရယ်နဲ့ အနီးဆုံး နေရာမှာ နေရာ ချပေး ထားတဲ့အတွက် ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ ကဧည့်ခံ စကားပြောဖြစ်ကြပါတယ်။
သူတို့နဲ့ ပြောရတာ အတော်လေး ဗဟုသုတ ရစရာ ကောင်းတဲ့ ဟာတွေ ပညာရစရာတွေ တွေးခေါ် သင့်တဲ့ လုပ် သင့်တဲ့ အခြားအရာတွေ ကို ရခဲ့ပါတယ်။ ထာဝရနောက်ကျတဲ့ ကိုညီရောက်လာတော့ ကျွန်တော်တို့ ၀ိုင်း အတော် မြိုင်သွားပါတယ်။ တခုရှိတာ ဘီယာ သောက်တဲ့သူက တခြမ်း၊ မသောက်တဲ့ သူတွေကတခြမ်း လောက်
နေရာ ယူမိနေသလိုပါ။ အဲဒီမှာ ရီရတာ၊ ကျွန်တော်တို့ စကားကောင်းနေတုန်း စားပွဲတွေ ပန်းကန်တွေကို တီးလို့ နဂါးနီ သီချင်းကို သံပြိူင်ဟစ် နေတာကတော့ မြို့စားမင်းနဲ့ ကို စိုးဇီယျတို့ ဦးဆောင်ထားတဲ့ ဟိုဘက်ခြမ်း ပေါ့။
ကဲ နေကြပါဦးဗျာ ခဏလေး နေမှ ဆိုကြမယ်ဆိုပြီး ချွေးသိပ်ထားရပါတယ်။
ကဲ ဘီယာလဲ အလုံး အစိတ်ကျော်နေဘီ ၊ ကြာရင် မွဲဆေး ဖော်သလိုဖြစ်တော့ မှာမို့ တဖြတ်ရှင်းရင် နောက် အစီအစဉ် ဆက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ ပြီးနောက်မှာ တော့ ဇော်ဂျီတို့၊ အင်တာနက်တို့၊ စုဘူးတို့၊ အီးကောမစ် တို့နဲ့ ဘဲ မြည်းလာ ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ကိုတက်တို့ ကဆက်ရန် ပြန်ရန် လူစုထပ်ခွဲပါတယ်။ ကိုအေးဆိုးတို့ အဖွဲ့ တာဝန်ခံ အဖြစ် ကျွန် တော်က တာဝန်ယူလိုက်ပါတယ်။ (မှတ်ချက်- ကိုချစ်စမ်းတို့ ကိုတက်တို့ ကိုမျက်စေ့ တို့ သည် မမူးရင် အေး ပါသည် ၊ နဲနဲလောက် မူးလာရင် များများ လေး ဘရုတ်ကျကာ ပျော် လေ့၇ှိသဖြင့် ကိုအေးဆိုးတို့ အဖွဲ့လို့ အမည်တပ်ထားပါသည်)
ကိုညီ နှင့် ဘာမှ မသောက်ဘဲ လိုက်မူးတတ်သူ ကိုစစ်၊ ရန်ကုန်တဖက်ကမ်းမှ လက်လှမ်းလာတဲ့ ကိုသန့် တို့၊
ရေကျော်မှာ အမေဆော်မှာ ကြောက်လို့ပြန်တဲ့ တေဇာ၊ ကိုဖြိုးတို့ ကလွဲရင် ကိုအေးဆိုးတို့ အဖွဲ့က လူစုံပါတယ်။
နောက်ပိုင်းဇာတ်ထုတ်ကို ဖြေမယ့် အဖွဲ့တွေကတော့
ကျွန်တော်၊ ကိုတက်၊ ကိုမျက်စေ့၊ ကိုနေဘုန်းလတ်၊ တိုလီမုတ်စလေး၊ ကိုစိုးဇီယျ၊ ကိုကျော်ဇေယျနဲ့ အတူ ဒီနေ့ မှ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အပြင်မှာတွေ့ပြီး ချက်ချင်းခင်သွားတဲ့ ကိုဝေယ့လင်းပါ အဆစ်ပါလာပါတယ်။
အောက်ကပုံက တော့ ဆက်လက် လမ်းကြောင်းထွက်ရင်း အိမ်ပြန်မယ့် အမျိသမီး ဘလောက်ဂါတွေအတွက် ကားလိုက်ငှား ပေးနေတာပါ။
အဲဒီနောက် ကိုနေဘုန်းလတ် ဆိုင်ရှိရာ ၃၈ လမ်း ကိုရောက်ရင်ဘဲ ကိုတက် တယောက် သူ့ ဟမ်းဖုံးကို ရေချိုး ပေးနပါတယ်.။ ဘယလို့ လဲမေးတော့ ကွမ်းတံတွေးတွေ ပေကုန်လို့ပါတဲ့။ အဲဒီကို ရောက်ကာမှ အစီအစဉ် တမျိုး ပြောင်းသွား ပြန်ပါတယ် ကိန်းဂဏန်းတွေ ရေကြမယ်တဲ့လေ။ ခုတော့စောပါသေးတယ်ဆိုပြီး အီးမေးလေးစစ်၊
လွစ္စလမ်းက ဘီယာဆိုင်မှာ ဆီထပ်ဖြည့်ဖိုက ထက်ထွက်လာပါတယ်။ စင်္ကာ ပူကနေဒီရောက်လာပြီး မှ မန်ယူနဲ့ ပွဲကို ကြည့်ချင်လို့ပါဆိုပြီး ပြောနေတဲ့ ကိုဝေယ့လင်းကို အားနာတာနဲ့ ဘီယာသောက်ရင်း မန်ယူပွဲကို ပြီးအောင် အားပေးလိုက်ပါတယ်၊ သောက်လေ မျက်စီကျယ်လေ ဖြစ်လာတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ တွေ သောက်တာတွေကို ခဏ ရပ်တန့်လိုက်ပြီး ပွဲ အပြီး ကိုနေဖုံးလတ်တို့ ဆိုင်မှာ နေရင်း ဘယ်သူ့ ကိုးက အကြီးဆုံးလဲ ပြိုင်ကြမယ်ပေါ့။
ဟိုရောက်ရော အင်တာနက်မြင်ရင် မနေနိုင်တဲ့ ဘလောက်ဂါများဖြစ်လေတော့ အညောင်းပြေ အညာပြေ အင်တာနက် သုံးလိုက်တာ ဘယ်သူမှ ပြန်မထတော့ဘူး။ ကိုတက်ကြီးကလဲ မော်နီတာကြည့်ရင်း ရီလိုက် ပြုံးလိုက်၊ ကိုမျက်စေ့က သူတယောက်ထဲ သုံးစာနေရာယူပြီး အိပ်နေ၊ တိုလီမုတ်စကလဲပို့ တင်၊ ကျွန်တော်နဲ့ ကိုစိုးဇီယျကကလဲ သန်ရာတွေကြည့်၊ ကိုချစ်စမ်းလဲ သီချင်းနားထောင်၊ ကိုကျော်ဇေယျကတော့ တော့လိုက် ငိုက်လိုက်ပါဘဲ၊ မြို့စားမင်းနဲ့ ကိုဝေယ့လင်းကတော့ အပေးမှာစီစဉ်နေသလိုလိုနဲ့ တက်အိပ်နေပါတယ်။
အတော်လေးကြာတော့ ၃ နာရီ ဆွမ်းချက်ရန် ဘွန်တော အော်လိုက်ကာမှ ကိုချစ်စမ်းက ပြန်တော့မယ်တဲ့။
မူးလို့ အိပ်မရတဲ့ ကိုတက်ကလဲ မထူးပါဘူးပြန်မယ်ဆိုပြီး ၃ နာရီခွဲလောက်မှာ ပြန်သွားပါတယ်။ အားလုံးလဲ အိပ်ကုန်ပါပြီ။ ၄ နာရီကျော်လောက်မှာတော့ တိုလီမုတ်စလေးလဲ အားရော့ကာ အိပ်ပါတော့မယ်လို့ လက်လျော့သွားလဲ
ကျွန်တော်သာလျှင်မိုးအလင်း ၆ နာရီခွဲအထိ လုံးဝမအိပ်ဘဲ ဖြစ်သမျှကို မှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါကြောင်း။
ဲမြန်မာဘလောက်ဂါ တယောက်ဖြစ်နေခြင်းအား ဂုဏ်ယူလျက်
(ဓါတ်ပုံများအား၊ ဘာညာ၊ ညီလေးတိုလီမုတ်စ၊ ညီလေးတေဇာ၊ ကိုဖြိုးတို့ထံမှ ရယူပါသည်)
ကိုအေးဆိုးတို့အဖွဲ့ကတော့ နာမည်တွင်ဦးတော့မှာပဲ။ :)
New bg? Eeee hee..ma nar lo bu.. mee mee lae lite mae :(
You guys seem so happy. I wish I will be there in next time. :)
where's your "si bone" ko gout? proud to hear that you guys successfully organized the seminar. =)